Misokatra ho an'ny orinasa: Blogging an'ny orinasa | Martech Zone
Misokatra ho an'ny orinasa: Blogging an'ny orinasa
Sabotsy, Martsa 12, 2011 Alahady Oktobra 19, 2014 Douglas Karr
Androany maraina, nanana fotoana nahafinaritra aho tamin'ny Seho amin'ny radio misokatra ho an'ny Business amin'ny Trey Pennington ary Jay Handler, samy mpandahateny mahay sy mpanolotsaina manampy orinasa hitondra izany amin'ny dingana manaraka. Ny lohahevitra, mazava ho azy, dia Blaogin'ny orinasa!
Nandritra ny fandaharana, Dan Waldschmidt nametraka fanontaniana mahafinaritra sasany izay tiako zaraina satria tsy afaka namoaka antsipirihany loatra tamin'ilay seho izahay:
Ny atiny dia zava-dehibe kokoa noho ny fanatsarana. Miombon-kevitra? Tsy misy? - Valiny: Eny… fa. Ny antony handaniako fotoana be dia be amin'ny mpanjifa amin'ny fanatsarana dia ny hahazoana antoka fa mampiasa tsara ny atiny soratany izy ireo. Zava-dehibe ny fanatsarana ny fikarohana satria hiantohana fa hita ao amin'ny motera fikarohana ny atiny. Zava-dehibe ny fanatsarana ny fiovam-po satria hanome làlana ho an'ny mpamaky ny fifindrana amin'ny famakiana lahatsoratra bilaogy ho lasa mpanjifa vaovao. Votoatiny mahafinaritra dia mandresy ary mahazo valiny ho anao; na izany aza, ny fanatsarana tsara dia hanintona sy hanova ny mpitsidika maro ho mpanjifa.
Inona ireo torohevitra 4-5 ambony ho an'ireo bilaogera? - Aza manomboka raha tsy azonao antoka fa manolo-tena ianao ary hanafaka. Midika izany fa manana lohahevitra bilaogy vitsivitsy ianao, manoratra tsy tapaka ary ianao aza mijanona. Aza miverimberina mamorona fitaovana marketing fotsiny - valio ireo fanontaniana izay tadiavin'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao. Zahao ny nalefa fampirimana ho an'ny hevitra momba ny atiny lehibe. Hamarino tsara fa manana làlana hiroso amin'ny mpanjifanao lalindalina kokoa ianao - io dia antso ho amin'ny hetsika eo amin'ny sisin-dàlana izay manondro ao amin'ny pejy fandraisana miaraka amin'ny mombamomba anao na laharana finday hanaovana orinasa. Aza avela kisendrasendra ny fanatsaranao karoka - ny sehatra, ny lohahevitra ary ny atiny rehetra dia tokony hohatsaraina mba hahafahan'ny motera fikarohana manondro ny atiny ary miakatra amin'ny valin'ny fikarohana ianao ho an'ireo lohahevitra mifandraika amin'ny orinasanao.
Ahoana ny amin'ny famaliana ireo fanontaniana atahoran'izy ireo? Tena mpitarika izany eritreritra izany… Eny, misy izany ary hitondra ny fahefana izy io. Betsaka ny olona manoratra ny bilaoginy amin'ny feo tsy madio lavorary. Ny fifandirana sy ny fanaovana ny marina dia hanosika ny resaka ary hanome ny mpamaky zava-misy fa sady marina ianao no misokatra. Anisan'izany ny fanoratana lahatsoratra momba ny tsy fahombiazanao toy ny fahombiazanao. Isika rehetra dia te-hiara-hiasa amin'ny tena olona ary fantatsika fa mitolona isika indraindray. Ny fahafantarana ny fomba handresen'ny orinasanao ny tsy fahombiazana dia mety hitondra fanantenana betsaka kokoa amin'ny orinasanao. Mamelombelona ny fahamarinana ary ny lohahevitra henjana no hitondra ny fahefana!
Ampifanaraho amin'ny Misokatra ho an'ny orinasa isaky ny sabotsy maraina amin'ny 9 maraina EST. Misaotra Trey sy Jay!
Tags: fanatsarana ny bilaogyfanatsarana ny atinyjay mpikarakaramisokatra ho an'ny orinasaTrey Pennington
Leaderpromos.com: vokatra tsara fampiroboroboana, tolotra lehibe!
Ny fampisehoana an-tsary ny fampahalalana: Omniture vs Webtrends
Mar 14, 2011 ao amin'ny 9: PM PM
Torohevitra lehibe. Tena nampahery ny naheno anao nizara ny fahalalanao.
Mahasorena ny hoe vitsy ny “mahazo izany”. Tohizo ny asa lehibe.